23 / 02 / 2019 | RayHaber
[04 / 12 / 2019] Tonga any Ankara, ny fiarandalamby haingam-pandeha ambony haingam-pandeha vaovao	Ankara 06
[04 / 12 / 2019] Gmamoğlu Nahazo ny Vaovao Momba ny fitaterana ranomasina ho an'ny olona Kartal	34 Istanbul
[04 / 12 / 2019] Corlu fiaran-dalamby fanalahidy fototra Ballast mitafy ahoana?	59 Corlu
[04 / 12 / 2019] Fiaran-dalamby haingam-pandeha vaovao eto Kapikule	22 Edirne
[04 / 12 / 2019] Protocol misy ny fihenam-bidy ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra	Tafika 52
Andro: 23 Febroary 2019
Ny minisitry ny kolontsaina sy ny fizahantany Mehmet Nuri Ersoy, taorian'ny fifandraisany tamin'ny Erzurum sy ny Eastern Express dia nankany Kars. Ny minisitra Ersoy, izay nihaona tamin'ny solontenan'ny sehatry ny fizahantany tao amin'ny distrikan'i Sarikamis, 81 [More ...]
Critical Source avy amin'ny CHP Serter mankany İzmir Metro
CHP Izmir lefitra Bedri Serter, 18 febroary 2019 daty ary nivoaka tao amin'ny programa ofisialy Gazette 30690 2019 Investment, mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fananganana sy ny fampiharana ny 30 amin'ity taona ity, ny XNUMX arivo fotsiny [More ...]
80 isan-jato ny angovo izany mandevona avy amin'ny tafo ahitana ny masoandro kobany amin'ny endri-javatra io ary iray amin'ireo voalohany any Torkia fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka miankina Intercity dia nisokatra tamin'ny mpanatrika lehibe. Masoandro eo amin'ny tafon'i Mugla Metropolitan Munisipaly [More ...]
Ny kaominin'i Manisa Metropolitan, Salihli'ye Şüheda sy ny Acar 'Prestige Street' tetik'asa manana toeram-ponenana vaovao ho an'ny olom-pirenena. Fanavaozana havaozina hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny farany; fandaharana maoderina fananganana maoderina miaraka amin'ny hajaonan'ny vahoaka Salihli [More ...]
Tsy misy anaran'i Adana ao amin'ny Metro Investing amin'ny Metro 2019
2019 miliara 3.2 miliara ao Istanbul, Ankara, 1 miliara kilao, Izmir, 30 arivo pounds no nomena aloa. 18 tamin'ny Gazety ofisialy Febroary 2019 dia navoaka tamin'ny Alatsinainy ho fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena. [More ...]
Minisitry ny fitaterana, ny Konya Metro Programa dia tsy nandray
Ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa no hampiasa ny ankamaroan'ny loharanony ho an'ny fanamboarana lalamby amin'ity taona ity. Tamin'ity taona ity, i Konya Metro dia tsy tafiditra anatin'ny programa fampiasam-bola nomanin'ny minisitera. KONYA METROSUNA 1 TSY MISY INDRINDRA [More ...]
Tranon'ny mpandeha an-tongotra mankany Gebze
Kaominin'i Kocaeli Metropolitan, mba hahafahana mifehy ny fifamoivoizana fiara, ary koa ny asan'ny mpandeha an-tongotra amin'ny fifamoivoizana dia afaka mametraka fangatahana ahafahana mivezivezy amim-pifaliana. Ny tetezana Metropolitan dia manorina ny tetezana mpandeha an-tongotra amin'ny fivezivezena be [More ...]
Ny kianjan'ny kianjan'ny kianjan'ny tranonkala dia mitazona fitaovam-piadiana milanja an'arivony 20
Nisokatra tamin'ny volana septambra ny valan-javaboary ambanin'ny tany ambanin'ny tany, natsangan'ny Kocaeli Metropolitan ao amin'ny biraon'ny governora teo aloha ary nanome voalohany an'i Kocaeli. Manome fiara an'arivony amin'ny volana 2018 [More ...]
HAVAİST isaky ny andro fandefasana 140 amin'ny seranam-piaramanidina ao Istanbul
A HAVAIST ait, izay sampan-draharahan'ny orinasa Bus Bus ao amin'ny Istanbul Metropolitan, izay manome serivisy fitateram-bahoaka mihoa-pampana amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul, 10 mankany Istanbul Airport 5 dia nanolotra sidina 140 isan'andro miaraka amin'ny zotra misimisy manomboka amin'ny Janoary. Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]
Tantara androany 23 Febroary 1942 Nisy didy iray navoaka hitondra ny seranan-tsambo İskenderun amin'ny Fitondran'ny Fitaterana an-dalamby an'ny fanjakana.
Androany amin'ny tantara: 5 Desambra 1989 TGV Atlantique ao amin'ny 482,4 km / h
Fampirantiana fiara mampiavaka AVM Mercedes-Benz Legend